Japan : Lahatsary Momba Ny “Vehivavy Fiononana” Misarika Ny Saina Manoloana Ny Olana Tsy Voavaha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2018 5:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, हिन्दी, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, English
70 taona mahery (2018) izay no nisian'ny ady lehibe faharoa, saingy mbola miandry fialantsiny ampahibemaso, sy fanonerana ara-materialy, avy amin'ny governemanta Japoney izay mandà hatrany ny zavatra takian-dry zareo ireo vehivavy nitaraina ho nalain'ny tafika japoney ankeriny hohandevozina ara-pananahana tany amin'ireo “toerana fampiononana”. Rehefa tapitra ny ady dia nilaozana tany amin'ny firenena vahiny ary matetika novonoina ho faty aza ireo vehivavy nampiasain'ny tafika japoney ireo. Amin'ny alalan'ny lahatsary an-tserasera isika no mahalala bebe kokoa ny manjo ireo “Vehivavy Fiononan'ny Miaramila” sy ny ezaka vita mba hampafantarana ny rehetra ny fisian'ity toe-javatra ity.
Ao amin'ny Witness’ The HUB no ahitantsika ny iray amin'ireo lahatsary be mpijery indrindra momba ireo “vehivavy fiononan'ny miaramila”-n'i Japan, nampiasain'ny tafika japoney ho mpivarotena nandritra ny ady lehibe faharoa, izay matetika nantsoina ho miaramila, nalaina an-keriny, voatery na noterena ho andevo ara-pananahana. Tsy ny vehivavy tao Japan ihany no tratran'ity olana ity, fa misy ihany koa ireo vehivavin'i Shina, Korea ary ireo faritra hafa teo ambany fifehezan'i Japan Imperialy nandritra io vanim-potoana io, ary nampiasaina ihany koa hanampy isa ireo vehivavy any amin'ny toeram-pilalaovam-behivavy natokana ho an'ny miaramila japoney. Atambatambatry ny lahatsary ireo saripika, sombin-taratasy sy kisarisary mandoko ny toe-java-misy mahafadiranovana ireo vehivavy ireo.
Mbola iadian-kevitra hatrany ity lohahevitra ity fa mandroso mihemotra hatrany amin'ny fanekena na fandavana ny fisiany ny governemanta japoney. Iadian'ny daholobe hevitra ihany koa izy ity hoe tena nisy tokoa ve sa tsia, ary andraikitry ny tafika tokoa ve sa tsia raha nisy izany. Manao fanentanana ny Amnesty International mangataka amin'ny governemanta japoney hiala tsiny sy hanome onitra ireo vehivavy ireo. Ao Londres, Angletera, misy fanolorana Monologues du Vagin notontosain'i Eve Ensler tamin'ny volana marsa hanaitra amin'ny fahafantarana ny fisian'ny tantaran'ireo “Vehivavy fiononana” tao Shina, leoocunha indray mampiseho amintsika ny sombin'izany fanolorana izany izay azonao jerena amin'ny alalan'ity rohy ity.
Fallbluesky, avy ao Brezila namoaka ny lahatsary manaraka mamelabelatra ny tantaran'ireo “Vehivavy Fiononana” ahitana ny sarin'ny sasantsasany amin'izy ireo amin'izao fotoana (2008) izao, tsy mitsahatra ny miezaka mitaky amin'ny governemanta Japoney mba hiaiky fa nanao fahadisoana izy ary lasibatra tamin'ny zavatra nataony.
Spritejune, ao Japana kosa namoaka lahatsary amin'ny endrika tantara an-tsary mitohy manga izay manasongadina ny tantaran'ny Vehivavy Fiononana, miaraka amin'ny resadresaka nosoratana amin'ny teny Anglisy. Lahatsary ahitana fizarana roa izany, ary mitondra ny lohateny hoe Teraka indray toy ny voninkazo (ho an'ny “vehivavy fiononana“) izay manjohy ny mpilalao fototra nanomboka tamin'ny fotoana nahazoany asa tao amin'ny orinasa kanefa dia nalefa tany amin'ny trano fivarotan-tena izy avy eo, hatramin'ny Fihetsiketsehana Alarobia izay nokarakarain'ireo vehivavy ireo nanomboka ny Alarobia 8 janoary 1992 teo anoloan'ny ambasady Japoney mba hitaky ny fankatoavana azy ireo ho lasibatra ary ampianarina ao anaty boky fianarana tantara ny tantaran'izy ireo, ankoatra ireo fitakiana hafa. Manaraka izany ny fizarana voalohany sy ny fizarana faharoa.
Ny hajian-tsary dia fanevan'ny sambo japoney araka ny futureatlas.com.